Private Primary School Principle | GETC & NURTURE English Training Center
Private Primary School Principle
Duties and Responsibilities of Private Primary Principle
အဓိကတာဝနျ သငျရိုးတနျးမြား သငျကွားရေးနညျး စနဈမြားနှငျ့ တနျးပိုငျတာဝနျခံ ဆရာ/ဆရာမမြား၊ ဘာသာရပျပွဆရာ/ဆရာမမြား၏ သငျကွားရေးအရညျအသှေးနညျးစနဈမြား၊ Lesson Plan မြား၊ ကြောငျးသား၊ ကြောငျးသူမြား၏ သငျယူမူရလဒျမြားကို ပုံမှနျအကဲဖွတျပွီး ကြောငျး၏ ဆောငျရနျရညျရှယျခကျြ ဖွဈသညျ့ ကြောငျးနပြေျော၍ စဉျးစားတှေးချေါတကျအောငျ အကွံပေး ဆှေးနှေးလမျးညှနျမှုပေးခွငျး လိုအပျသညျ့ အရေးယူမှုမြား ဆောငျရှကျခွငျးစသညျ့ ကြောငျးအုပျခြုပျရေးမိဘနှငျ့ ပွောဆိုဆကျဆံရေး၊ အရညျအသှေး ထိနျးသိမျးရေး၊ ကိစ်စရပျမြားနှငျ့ အစိုးရအဖှဲ့နှငျ့ပတျသကျသညျ့ ကိစ်စအဝဝကိုအပွညျ့အဝ ကွီးကွပျတာဝနျယူ အကောငျအထညျဖျော စီမံခနျ့ခှဲရနျ။
၁။သငျရိုးနှငျ့သငျကွားရေးအစီအစဉျမြားကို အဖှဲ့အစညျးမှခမြှတျထားသညျ့ မြှျောမှနျးခကျြနှငျ့အညီပွငျဆငျခွငျးနှငျ့ စီစဉျအကောငျအထညျဖျော စီစဉျဆောငျရှကျခွငျး။
၂။အဖှဲ့အစညျးတှကေိုလိုအပျသညျ့လကေ့ငျြ့သငျကွားရေးနှငျ့ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးဆိုငျရာအစီအစဉျမြားကိုအမွဲ စောငျ့ ကွညျ့လလေ့ာစမျးစဈ၍ ခတျေနှငျ့ အညီထိရောကျသောသငျကွားရေးနှငျ့ ဝနျဆောငျမှုပေးနိုငျရနျ သကျဆိုငျရာ တာဝနျခံဆရာ/ဆရာမ၊ဝနျထမျးမြားအတှကျ Teacher training program ၊Profession Development Program နှငျ့ Capacity development workshop စသညျ ကိစ်စအဝဝကို အပွညျ့အဝ ကွီးကွပျတာဝနျယူစီမံခနျ့ခှဲခွငျး။
၃။ကြောငျးမှစီစဉျပေးသညျ့ စာမေးပှဲနှငျ့ ပတျသကျသော သငျကွားရေးရလဒျ ကောငျးဆုံးရလဒျ ရရှိရေးအတှကျ အတနျးတှငျ စာမေးပှဲပွငျဆငျလကေ့ငျြ့ခွငျး၊ မေးခှနျးပုံစံရေးဆှဲထုတျပွနျခွငျး၊ စဈဆေးအကဲဖွတျခွငျး စသညျ့ စာမေးပှဲနှငျ့ ပတျသကျသညျ့ကိစ်စအဝဝကို တာဝနျကွီးကွပျစီမံခနျ့ခှဲခွငျး။
၄။ကြောငျးသားရေးရာနှငျ့ ပတျသကျသညျ့ကိစ်စ အဝဝနှငျ့ မိဘအုပျထိနျးသူမြားနှငျ့ ပတျသကျသညျ့ ကိစ်စအဝဝတို့ကို ထိရောကျစှာတာဝနျယူစီမံခနျ့ခှဲခွငျး။
၅။ ထိရောကျသော သငျကွားရေးနှငျ့ ဝနျဆောငျမှုပေးနိုငျရနျအတှကျ သကျဆိုငျရာအတနျးပိုငျ ဆရာ၊မနှငျ့ ဘာသာရပျပွဆရာမမြားကို ကွီးကွပျလမျးညှနျစီမံခနျ့ခှဲခွငျး။
အဓိကတာဝန် သင်ရိုးတန်းများ သင်ကြားရေးနည်း စနစ်များနှင့် တန်းပိုင်တာဝန်ခံ ဆရာ/ဆရာမများ၊ ဘာသာရပ်ပြဆရာ/ဆရာမများ၏ သင်ကြားရေးအရည်အသွေးနည်းစနစ်များ၊ Lesson Plan များ၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ သင်ယူမူရလဒ်များကို ပုံမှန်အကဲဖြတ်ပြီး ကျောင်း၏ ဆောင်ရန်ရည်ရွယ်ချက် ဖြစ်သည့် ကျောင်းနေပျော်၍ စဉ်းစားတွေးခေါ်တက်အောင် အကြံပေး ဆွေးနွေးလမ်းညွန်မှုပေးခြင်း လိုအပ်သည့် အရေးယူမှုများ ဆောင်ရွက်ခြင်းစသည့် ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးမိဘနှင့် ပြောဆိုဆက်ဆံရေး၊ အရည်အသွေး ထိန်းသိမ်းရေး၊ ကိစ္စရပ်များနှင့် အစိုးရအဖွဲ့နှင့်ပတ်သက်သည့် ကိစ္စအဝဝကိုအပြည့်အဝ ကြီးကြပ်တာဝန်ယူ အကောင်အထည်ဖော် စီမံခန့်ခွဲရန်။
၁။သင်ရိုးနှင့်သင်ကြားရေးအစီအစဉ်များကို အဖွဲ့အစည်းမှချမှတ်ထားသည့် မျှော်မှန်းချက်နှင့်အညီပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် စီစဉ်အကောင်အထည်ဖော် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
၂။အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလိုအပ်သည့်လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်များကိုအမြဲ စောင့် ကြည့်လေ့လာစမ်းစစ်၍ ခေတ်နှင့် အညီထိရောက်သောသင်ကြားရေးနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ခံဆရာ/ဆရာမ၊ဝန်ထမ်းများအတွက် Teacher training program ၊Profession Development Program နှင့် Capacity development workshop စသည် ကိစ္စအဝဝကို အပြည့်အဝ ကြီးကြပ်တာဝန်ယူစီမံခန့်ခွဲခြင်း။
၃။ကျောင်းမှစီစဉ်ပေးသည့် စာမေးပွဲနှင့် ပတ်သက်သော သင်ကြားရေးရလဒ် ကောင်းဆုံးရလဒ် ရရှိရေးအတွက် အတန်းတွင် စာမေးပွဲပြင်ဆင်လေ့ကျင့်ခြင်း၊ မေးခွန်းပုံစံရေးဆွဲထုတ်ပြန်ခြင်း၊ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း စသည့် စာမေးပွဲနှင့် ပတ်သက်သည့်ကိစ္စအဝဝကို တာဝန်ကြီးကြပ်စီမံခန့်ခွဲခြင်း။
၄။ကျောင်းသားရေးရာနှင့် ပတ်သက်သည့်ကိစ္စ အဝဝနှင့် မိဘအုပ်ထိန်းသူများနှင့် ပတ်သက်သည့် ကိစ္စအဝဝတို့ကို ထိရောက်စွာတာဝန်ယူစီမံခန့်ခွဲခြင်း။
၅။ ထိရောက်သော သင်ကြားရေးနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာအတန်းပိုင် ဆရာ၊မနှင့် ဘာသာရပ်ပြဆရာမများကို ကြီးကြပ်လမ်းညွန်စီမံခန့်ခွဲခြင်း။
Requirements for Private Primary School Principal
1.B.Ed (or) Med ဘှဲ့ရရှိထားသောသူဖွဈရမညျ။
3.စနဈသဈမူလတနျးသငျရိုးကို ပိုငျနိုငျကြှမျးကငျြစှာ သိရှိနားလညျထားသူဖွဈရမညျ။
5.သကျဆိုငျရာအစိုးရပညာရေးဌာနနှငျ့ အခွားဆကျစပျဌာနမြားနှငျ့ ပွလေညျကောငျးမှနျစှာ ဆကျသှယျဆောငျ ရှကျနိုငျသူဖွဈရမညျ။
6.လုပျကိုငျတိုးတကျ လလေ့ာသငျယူလိုစိတျ အထူးပွငျးထနျသူဖွဈရမညျ။
7.မိမိလကျထောကျ ဆရာ/မမြားကို စံနမူနာပွပွီး ဦးဆောငျဦးရှကျ ပွုနိုငျသူဖွဈရမညျ။
8.IT ပိုငျးဆိုငျရာကို သိရှိတတျကြှမျးအသုံးပွုနိုငျသူ ဖွဈရမညျ။
1.B.Ed (or) Med ဘွဲ့ရရှိထားသောသူဖြစ်ရမည်။
3.စနစ်သစ်မူလတန်းသင်ရိုးကို ပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်စွာ သိရှိနားလည်ထားသူဖြစ်ရမည်။
5.သက်ဆိုင်ရာအစိုးရပညာရေးဌာနနှင့် အခြားဆက်စပ်ဌာနများနှင့် ပြေလည်ကောင်းမွန်စွာ ဆက်သွယ်ဆောင် ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
6.လုပ်ကိုင်တိုးတက် လေ့လာသင်ယူလိုစိတ် အထူးပြင်းထန်သူဖြစ်ရမည်။
7.မိမိလက်ထောက် ဆရာ/မများကို စံနမူနာပြပြီး ဦးဆောင်ဦးရွက် ပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
8.IT ပိုင်းဆိုင်ရာကို သိရှိတတ်ကျွမ်းအသုံးပြုနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
Salary+ Benefits = 500000 ​MMK
တဈလလြှငျစာအုပျ အနညျးဆုံး နှဈအုပျဖတျနိုငျသူ ဖွဈရမညျ။
What do you love to do and professionally expertise in Private Education?
What are you not really satisfied with your professional expertise?
English Language Teaching Program Coordinator